LG na-ekwuputa Nnukwu Nmepụta Mgbanwe maka LG G9 | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | LG, Mobiles, Noticias
Mbinye aka LG anọwo ọtụtụ afọ n'ọtụtụ mpaghara nkà na ụzụ. Na na mpaghara smartphone ọ nwere ọdịiche mgbe niile. Anyị enweela ike ịnụ ụtọ nke ukwuu mbinye aka nke ejiri aka ya dichaa ubu ya n’elu igwe ruo otutu afo nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ma ọ bụkwa eziokwu na n'ihe gbasara imewe, ngwa ahịa ha kachasị ọhụrụ apụtabeghị.
Unghara nke ọma bụ ihe kachasị njọ nwere ike ime onye nrụpụta. N'ahịa ebe a na-enye ọtụtụ onyinye na ebe onye ọ bụla chọrọ ịpụ, na mgbakwunye na atụmatụ ndị dị ike nke anyị na-ahụkarị na LG, imewe na-on a isi ọrụ. Ndị ọrụ ha maara ya ha emewo ihe n’okwu a hụ na n'oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ ọkpụrụkpụ mgbanwe na ngwaọrụ ọhụrụ nke mbinye aka.
Nzube nke LG ga-alaghachi na nzụlite
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ekikepụtawo ọrụ n’ụzọ pụtara ìhè karịa ka ọ dị na mbụ. N'ahịa dị otú a zuru ụwa ọnụ ebe anyị hụrụ ọtụtụ ngwaọrụ nwere ike ịnye otu uru ahụ, kwụpụta n'usoro ọdịdị ahụ dị mkpa. Ihe owuwu nke smartphones na nhazi ha sitere na incorporation nke ọhụrụ ọcha na na mgbanwe nke ẹdude ndị.
Anyị na-ahụ otú igwefoto si malite site na inwe otu igwefoto azụ ruo mgbe ịhụ ngwaọrụ nwere ese foto ise. Na nyocha ha agbanweela ọtụtụ. Na mgbakwunye na too na nha nke nta nke nta, ha enwetawo mkpebi, nguzogide na usoro. Samsung nke ohuru ohuru site n’inye ya akụkụ njedebe nke Edge ngwaọrụ ha na ọtụtụ ndị nrụpụta ndị ọzọ gbasoro usoro ahụ iji kwado ngwaọrụ ha. Na Ngwa ndị ọzọ akwụsịbeghị ma.
LG yiri ka meghere anya ya otu oge, ma nwee ọnụ ahịa ya ma emechaa ... Ngwaọrụ gị ọzọ, nke ọtụtụ tụrụ anya ya LG G9, nwere ike ịpụta mgbanwe ịchọ mma maka ụlọ ọrụ ahụ ma e jiri ya tụnyere ihe anyị na-emebu. Dabere na osise osise nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya gosipụtara, anyị ga-ahụ a ama na a curved ihuenyo na fọrọ nke nta ka ọ bụla bezels. Na na azụ ya a igwefoto atọ nke anyị na-enweghị data. E wezụga ike na atụmatụ nke ngwanrọ na ngwaike, LG na-aga n'ihu na imewe iji zoo asọmpi n’elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG na-ekwuputa mgbanwe mgbanwe dị ukwuu maka LG G9
Worldwa nke ìhè na anwansi na-echere gị na nnukwu Eluigwe: Childrenmụ nke Ìhè